Ipulangwe elingenalutho? Ipulangwe elingenalutho lihola phambili kwezobuchwepheshe
Ipulangwe liyibhodi elenziwe ngemigqa eminingi elenziwe ngemithi yokwaluka ephothiwe evela ezingxenyeni zokhuni noma ngokhuni oluncane oluhlelwe kusuka ezikweleni zezinkuni futhi lwanamathelaniswa yizinamathelisi, futhi ingenye yezinto ezijwayelekile zefenisha. Kodwa-ke, iningi lezinamathelisi zokhuni zendabuko liyi-resin yokwenziwa ...
Umehluko phakathi kweplywood ne-blockboard
I-blockboard. I-blockboard yakhiwe ngebhodi eyisiqalo kanye nobuso bebhodi eliqinile. Ibhodi lomgogodla webhlokhi ukuhlukanisa izinkuni kusuka ku-lath, imvamisa kusetshenziswa uhlobo olufanayo noma izakhiwo ezifanayo zohlobo. Ukuvinjelwa kokubheja kokuqukethwe komswakama webhodi eliphakathi ...
Umsuka weSulong Wood
Eminyakeni yamuva nje, uPizhou, ethembele kwizinsizakusebenza ze-poplar ezicebile zezindawo zasendaweni nezizungezile, ukhiqize imboni yokucubungula iphaneli, abalimi abaningi abenza umkhuba wokusabalalisa i-log banqwabelene nemali, baphelelwe yimibono yebhizinisi. Umbuso wePizhou ...